Tsamba Yekutanga kuvaKorinde 3:1-23
VaKorinde vachiri venyama (1-4)
Mwari anoita kuti zvikure (5-9)
Tinoshanda pamwe naMwari (9)
Vaka nezvinhu zvisingatsvi (10-15)
Muri temberi yaMwari (16, 17)
Uchenjeri hwenyika upenzi kuna Mwari (18-23)
3 Saka hama, ndakanga ndisingakwanisi kutaura nemi sendiri kutaura nevanhu vemweya,+ asi nevanhu venyama, vacheche+ muna Kristu. 2 Ndakakupai mukaka, kwete zvekudya chaizvo, nekuti makanga musati manyatsosimba. Kunyange nanhasi hamusati manyatsosimba,+ 3 nekuti muchiri venyama.+ Sezvo pakati penyu paine godo nekukakavadzana, hamusi venyama here+ uye hamusi kufamba sezvinoita vanhu here? 4 Nekuti kana mumwe achiti, “Ini ndiri waPauro,” mumwewo achiti, “Ini ndiri waAporo,”+ hamusi kuita zvinongoitwa nevanhu here? 5 Saka Aporo chii? Ko iye Pauro chii? Vanongovawo vashumiri+ vakaita kuti muve vatendi, sekupiwa kwakaitwa mumwe nemumwe naShe. 6 Ini ndakadyara,+ Aporo akadiridza,+ asi Mwari akaita kuti zvikure, 7 saka anodyara kana anodiridza haasi chinhu, asi Mwari anoita kuti zvikure.+ 8 Munhu anodyara neanodiridza vamwe chete,* asi mumwe nemumwe achawana mubayiro unoenderana nebasa rake.+ 9 Nekuti tinoshanda pamwe chete naMwari. Imi muri munda waMwari uri kurimwa, muri chivakwa chaMwari.+ 10 Maererano nenyasha dzaMwari dzandakaratidzwa, ndakaisa faundesheni+ semuvaki ane unyanzvi,* asi mumwe munhu ari kuvakira pairi. Asi mumwe nemumwe ngaarambe achingwarira mavakiro aari kuita pairi. 11 Nekuti hapana munhu anogona kuisa imwe faundesheni kunze kweyakatoiswa, inova ndiyo Jesu Kristu.+ 12 Kana munhu achivaka pafaundesheni yacho negoridhe, nesirivha, nematombo anokosha, nematanda, neuswa, kana mashanga, 13 basa remumwe nemumwe richabudiswa pachena zvariri, nekuti zuva racho richariratidza, nekuti richaratidzwa nemoto,+ uye moto ucharatidza kuti basa rakavakwa nemumwe nemumwe ndererudzii. 14 Kana basa remunhu raakavaka pairi rikaramba riripo, iye achawana mubayiro; 15 kana basa remunhu rikatsva, acharasikirwa, asi iye achaponeswa; asi kana zvikadaro, zvichaita sekunge apfuura nemumoto. 16 Hamuzivi here kuti muri temberi yaMwari+ uye kuti mweya waMwari unogara mamuri?+ 17 Kana munhu akaparadza temberi yaMwari, Mwari achamuparadza; nekuti temberi yaMwari itsvene, uye imi ndimi temberi yacho.+ 18 Ngaparege kuva nemunhu anozvinyepera: Kana pakati penyu paine munhu anofunga kuti akachenjera munyika ino, ngaave benzi, kuti ave akachenjera. 19 Nekuti uchenjeri hwenyika ino upenzi kuna Mwari, nekuti zvakanyorwa kuti: “Anobata vakachenjera mukunyengera kwavo.”+ 20 Uyezve: “Jehovha* anoziva kuti kufunga kwevanhu vakachenjera hakuna zvakunobatsira.”+ 21 Saka ngaparege kuva neanozvirumbidza nevanhu; nekuti zvinhu zvese ndezvenyu, 22 angava Pauro kana Aporo kana Kefasi*+ kana nyika kana upenyu kana rufu kana zvinhu zviripo iye zvino kana zvinhu zvichauya, zvinhu zvese ndezvenyu; 23 nemiwo muri vanhu vaKristu;+ uye Kristuwo, ndewaMwari.
^ Kana kuti “chinangwa chavo chimwe chete.”
^ Kana kuti “semutungamiriri webasa akachenjera.”